Ukutya ikati, Ukutya kwezinja, ukunyanga ikati, idada elomileyo uJerky-Ole
Qingdao Ole Pet Food Co., Ltd. yasekwa ngoJuni ka-2011 Siyinkampani ebanzi edibanisa i-R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kokutya kwezilwanyana.
Inkampani yethu ikakhulu ibandakanyeka kukutya okutyiweyo, iinkonkxa ezimanzi, ukuhlafuna amathambo kunye namathambo wokubala acocekileyo ezinja neekati.
Efektri yethu ibekwe eQingdao, malunga nemizuzu engama-40 kude kwiSikhululo senqwelomoya samanye amazwe kunye neQingdao Port, uthungelwano lwezothutho oluphucukileyo lubonelela ngendlela efanelekileyo yeshishini lamanye amazwe.
Intengiso yezilwanyana zasekhaya
Idada isongele intonga eluhlaza
Iingcebiso zokondla: Ubudala bezinja Inani lokondla (isilayi / usuku) i-3-10 inyanga 1 Ngaphezulu kwenyanga eli-10 1-2 Ingqwalaselo: Ukuphepha umngcipheko wokuginya. Sukuyisebenzisa le mveliso xa isilwanyana sakho siphazamisekile okanye emva kokuzilolonga kakhulu. Uhlalutyo lobumbeko: Iiproteni zeCrube: Iipesenti ezingama-65 zeCrube Fat: 2.5% max iCrube Fibre: 1% max Ash: 3.5% ubuninzi bokufuma: 18% ubuncwane beMveliso: Igama leemveliso Idada lisonge intonga eluhlaza. Zilungele Zonke iintlobo ze ...
Idada elomileyo uJerky
Iingcebiso zokondla: Ubunzima benja (kg) Inani lokondla (isilayi / usuku) 1-5 1-3 5-10 3-5 10-25 5-8 Ngaphezulu kwama-25 8-13 Qaphela: Le mveliso yenziwe ngenyama entsha egcadiweyo ephantsi Umxholo wokufuma, kuyacetyiswa ukuba usike amaqhekeza amancinci xa utyisa izinja ezincinci. Uhlalutyo lobumbeko: I-Crube Protein: 50% min Crube Fat: 2.5% max Crube Fibre: 1% max Ash: 3.5% max Ukufuma: 18% max Imanyuwali yemveliso: Imveliso igama Duck Jerky Iinkcukacha zeMveliso 100g ngombala ngamnye ...
Inkukhu kunye nesilayi senkomo
Uhlalutyo lobumbeko: I-Crube Protein: 48.6% min Crube Fat: 7.7% max Crube Fibre: 0.1% max Crude Ash: 4.3% max Moisture: 14% max Product product: Products name Chicken & Beef Slice Product product 100g per color bag (accept ulwenziwo ) Ifanelekile Zonke iintlobo ukuba izinja neekati ngaphezulu kweenyanga ezintathu ubudala Ubomi beshelfini iinyanga ezili-18 Imveliso ephambili yezithako Inkukhu, indlela yokuGcina inyama yenkomo Nqanda ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kwindawo epholileyo engenisa umoya Intshayelelo ehambelanayo: Yonke into ...
Inkukhu isongele ibhatata emnandi
Uhlalutyo lobumbeko: I-Crube Protein: 15% min Crube Fat: 1.5% max Crube Fibre: 4.5% max Ash Crude: 3.5% max Moisture: 18% max Product product: Products name Chicken Wrap Sweet Potato specifications 100g per color bag (accept ulwenziwo ) Ifanelekile Zonke iintlobo ukuba izinja kunye neekati ngaphezulu kweenyanga ezintathu ubudala Ubomi beshelfini iinyanga ezili-18 Imveliso ephambili yezithako Inkukhu, iitapile Indlela yokugcina inqanda ilanga elithe ngqo, ngokukhethekileyo kwindawo epholileyo kwaye enomoya Intshayelelo ehambelanayo: Si ...
Inkukhu yenkukhu kunye nentonga yeCowhide
Uhlalutyo lobumbeko: Iprotein ekrwada; Iipesenti ezingama-38, iCrude Fat: Iipesenti ezi-4,5 ubukhulu, ifayibha ekrwada: 1.8% ubuninzi, i-Ash ekrwada: 4.5% ubuninzi, Ukufuma: 16% ubuninzi. Imanyuwali yemveliso: Igama leNkukhu yenkukhu kunye nentonga yeCowhide Ukucaciswa kweMveliso 100g ngengxowa nganye yemibala (yamkela ukwenziwa ngokwezifiso) Ifanelekile Zonke iintlobo izinja ezincinci neziphakathi ngaphezulu kweenyanga ezine ubudala Ubomi beshelf iinyanga ezili-18. indawo epholileyo kwaye engenisa umoya Ukulumka Izinja unde ...
I-Bleach Ear Ear kunye neNkukhu
Uhlalutyo lobumbeko: I-Crube Protein: 65% min Crube Fat: 8% max Crube Fibre: 1.5% max Ash: 4.5% max Ukufuma: 18% max Imanyuwali yemveliso: Imveliso igama Bleach Umvundla indlebe ngeNkukhu Imveliso iinkcukacha ze-100g ngengxowa nganye yombala (yamkela ulwenziwo ) Ifanelekile Zonke iintlobo zezinja ngaphezulu kweenyanga ezintathu ubudala Ubomi beshelfini iinyanga ezili-18 Imveliso eziphambili izithako Indlela yokugcina inkukhu Gwema ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kwindawo epholileyo nenomoya
Amaqebengwana amancinci alungele izinja
Izinja ezibawayo, ukongeza kwimilo yemihla ngemihla ...
Ukuqaliswa komkhenkce owomileyo ...
Umkhenkce wokomisa itekhnoloji kukukhenkceza okrwada okutsha ...
Ukutya okufanelekileyo kwezinja
Okokuqala, lawula inani lokutya okulula kwenja, inja sn ...
Indlela yokwenza umkhwa olungileyo ebomini, ukutya kunye nokususwa kwezinambuzaneNantoni na onokuqhagamshelana nathi ngalo naliphi na ixesha
Inkampani: Qingdao Ole Pet Ukutya Co., Ltd.
Umnxeba: +86 53286135522